Kismaayo News » Cabdiraxman Cabdishakuur oo u ganbiyay Maxkamadda Gobolka Banaadir
Cabdiraxman Cabdishakuur oo u ganbiyay Maxkamadda Gobolka Banaadir
Kn: Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo maanta ay ahayd inuu hortago maxkamadda racfaanka ee Gobolka Banaadir si kiiska dacwadiisa mar kale loo dhagaysto ayaa u ganbiyay. Waxyar ka hor xiliga maxkamadda laga filaayay inuu soo xaadiro ayuu Cabdiraxmaan kala diray qareenadii u doodilahaa asagoo dib u furista kiiskan ku sheegay mid siyaasadaysan oo uusan aqbali karin.
Maxkamadda racfaanka ayaa balan kale u qabatay Cabdiraxmaan taasi oo ku mudaysan bisha Jaano ee sanadka cusub. Wali ma jiro war amuurta ku saabsan oo ka soo baxay Cabdiraxmaan iyo waliba inuu qabsaday qareenno cusub iyo in kale.
Kiiska Cabdiraxmaan ayaa u muuqda inuu galay xaalad xarig jiid oo labada dhinac ee Mucaaradka iyo dawladdu ay isku tijaabinayaan koodii itaal roon. Dawladda ayaa isticmaalaysa awood kasta oo ay ku aamusiinayso garabyada isbahaysiga siyaasadeed ee mucaaradka ku ah oo Cabdiraxmaan u yahay waysha gowrac, dibigu haku quusqaatee, halka Cabdiraxmaan iyo saaxiibadiisa mucaaradku ay isticmaalayaan kaarka qabiilka si ay dawladda dashwiish ugu furan ama ugu yaraan ay u khalkhal galiyaan.
Hoos ka daalaco waraaqda uu Cabdiraxmaan ku fiijiyay qareennadiisa oo riix xididka hoose iyo kii maxkamadda racfaanku ugu qabatay mudada cusub.
KA NOQOSHO IDMASHO QAREEN